I-TRF ivelisa izibonelelo | I-Foundation Foundation
Ikhaya Ngathi I-TRF ikhuthaza izibonelelo
Isiseko soMvuzo sikubonelela ngezixhobo zamvanje zokukunceda ekukhokeleleni kubungozi obunokubakho bokubukela iphonografi kwi-intanethi. Kweli candelo uza kufumana izinto ezininzi ezinomdla. Siqale ukuphuhlisa izixhobo zethu kwaye sonwabile ukukwazi ukubonelela ngohlaziyo lweencwadi, iividiyo malunga nesayensi ye-porn, ukurekhodwa kwengqondo yokucamngca kunye nophando oluninzi. Sikwabonelela ngengcebiso ngendlela yokufikelela kumaphepha enzululwazi oqobo.
Nangona abantu beqhutywa ngokukodwa ngomsindo, iteknoloji ayikho. Isekelwe kwimiqobo ecacileyo, eyakhiwe ngezilungiso ezilungiselelwe ukuba zibambe kwaye zigcine ingqalelo. I-intanethi yindlela echanekileyo yempembelelo kwaye inefuthe elikhulu kakhulu ekubunzeni izithethe zenkcubeko kunokuba yintsapho. Ukuqonda iimpembelelo zalo kubalulekile kwimpilo yethu, ngakumbi kwizizukulwana zethu ezizayo. Ukuphendula kule ngcamango, siye saphulaphula oko abantu bafuna ukwazi ngothando, ngokwesondo, ubudlelwane kunye ne-intanethi. Ukususela phakathi kwe-2014 umsebenzi wethu kunye nabantu abancinci kunye nabaqeqeshi kwintsimi yemfundo yesondo uye wafumana amanqanaba aphezulu anganeliseki ngobunjani, ukubaluleka nokusebenza kwezixhobo ezikhoyo zokufundisa. I-TRF ivelisa izixhobo zokunceda ukulungiswa kokungalingani.
Abameli be-The Reward Foundation ngoku bathethile kwiminyhadala yoluntu engaphaya kweshumi elinambini e-UK. Sikwathethile nabaphulaphuli abaziingcali eMelika, eJamani, eTurkey naseCroatia.
Siye sathetha ngeifom zonke zeenkwenkwe namantombazana ezikolweni, kwakunye nokusebenza kunye namaqela amancinci kunye nomntu ngamnye. Oku kwasisenza sisebenzise ubuchule be-Human Centered Design ukuhlakulela izixhobo ezinokusingatha ubuthathaka bezinto ezikhoyo.
Ngonyaka ozayo I-Foundation Resew Foundation inethemba lokuvelisa izicwangciso zezifundo zokusetyenziswa kwizikolo eziprayimari neziziisekondari.
Nazi izibonelelo ezikhoyo ngoku…